Ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm mba ụwa na Netherlands - Law & More
Gba alụkwaghịm bụ ihe omume dị mkpa nye onye ọ bụla. Ọ bụ ya mere ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm ji anọrọ gị ndụmọdụ onwe onye. Nzọụkwụ mbụ ịgba alụkwaghịm bụ ịkpọ onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm. Onye ọka ikpe kwupụtara ịgba alụkwaghịm ma naanị onye ọka iwu nwere ike itinye akwụkwọ arịrịọ maka ịgba alụkwaghịm na ụlọ ikpe. Enwere ikpe dị iche iche gbasara usoro ịgba alụkwaghịm nke ụlọ ikpe kpebiri. Ihe atụ nke usoro iwu ndị a bụ…
Gba alụkwaghịm bụ ihe omume dị mkpa nye onye ọ bụla.
Ọ bụ ya mere ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm ji anọrọ gị ndụmọdụ onwe onye.
> Atụmatụ site n'aka ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm
> Kedu ihe a ga-ewe onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm?
> Ajụjụ ndị a na-ajụkarị maka ịgba alụkwaghịm
Nzọụkwụ mbụ ịgba alụkwaghịm bụ ịkpọ onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm. Onye ọka ikpe kwupụtara ịgba alụkwaghịm ma ọ bụ naanị onye ọka iwu nwere ike ịrịọ ụlọ ikpe maka ịgba alụkwaghịm. Enwere ikpe dị iche iche gbasara usoro ịgba alụkwaghịm nke ụlọ ikpe kpebiri. Ihe atụ nke usoro iwu ndị a bụ:
• Olee otu esi ejikọ akụ gị niile?
• Onye ọlụlụ gị ọ bụla enwere ike ịnwe akụkụ nke ego ezumike nka gị?
• Olee nsogbu ịgba alụkwaghịm na-akpatara ndị mmadụ?
• Di ma ọ bụ nwunye gị ọ nwere ikike ịkwado di ma ọ bụ nwunye?
• Ọ bụrụ otú ahụ, ego ole bụ alimoni a?
• Ọ bụrụkwa na ị nwere ụmụ, olee otu a ga-esi hazie ịkpọtụrụ ha?
Atụmatụ site n'aka ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm
Mgbe ị kpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị, otu n'ime ndị ọka iwu anyị nwere ahụmahụ ga-agwa gị okwu ozugbo. Law & More ọdịiche dị iche na ụlọ ọrụ iwu ndị ọzọ n'ihi na ụlọ ọrụ anyị enweghị ọfịs nzuzo, nke na-eme ka anyị hụ na anyị nwere nkwukọrịta dị mkpirikpi na ndị ahịa anyị. Mgbe ị kpọtụrụ ndị ọka iwu anyị na ekwentị maka ịgba alụkwaghịm, ha ga-ebu ụzọ jụọ gị ọtụtụ ajụjụ. Anyị ga-akpọbata gị n'ọfịs anyị na Eindhoven, ka anyị wee mata gị. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, nhọpụta ahụ nwekwara ike ịme ekwentị ma ọ bụ nzukọ vidiyo.
• N'ime oge izizi a ị nwere ike ịkọ akụkọ gị ma anyị ga-eleba anya na ndabere ọnọdụ gị. Ndị ọka iwu anyị gbara alụkwaghịm ga-ajụkwa ajụjụ ndị dị mkpa.
• Mgbe ahụ anyị ga-atụle gị usoro ndị ekwesiri ịme na ọnọdụ gị ma depụta nke a n'ụzọ doro anya.
• Ọzọkwa, n'oge nzukọ a, anyị ga-egosi ihe ịgba alụkwaghịm na-adị, ihe ị ga-atụ anya ya, ogologo oge ọ ga-ewe n'ozuzu ya, akwụkwọ ndị anyị ga-achọ, wdg.
• N’ụzọ dị otu a, ị ga-enwe ezigbo echiche ma mara ihe na-abịa. Oge ọkara mbụ nke nzukọ a bụ n'efu. Ọ bụrụ, n'oge nzukọ ahụ, ị ​​kpebiri na otu onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm nwere enyemaka ga-enyere gị aka, anyị ga-edekọ ụfọdụ nkọwa gị iji depụta nkwekọrịta nkwekọrịta.
Emechaa nzukọ nke mbụ, ị ga-enweta nkwekọrịta ọrụ n'aka anyị ozugbo site na e-mail. Dịka ọmụmaatụ, nkwekọrịta a na-ekwu, na anyị ga-adụ gị ọdụ ma nyere gị aka n'oge ịgba alụkwaghịm gị. Anyị ga-ezitere gị usoro na ọnọdụ ndị metụtara ọrụ anyị. You nwere ike were dijitalụ bịanye aka na nkwekọrịta ọrụ.
Nata nkwekọrịta ọrụ nke aka, ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm nwere ahụmahụ ga-amalite ọrụ ozugbo na ikpe gị. Na Law & More, a ga-agwa gị usoro niile onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm na-ewere maka gị. Dị ka o kwesịrị ịdị, a ga-ebu ụzọ chịkọta usoro niile na gị.
Na omume, ihe mbụ ị na-eme bụ izigara onye òtù ọlụlụ gị akwụkwọ ozi ịgba alụkwaghịm. Ọ bụrụ na ọ nwerelarịrị ọkàiwu ịgba alụkwaghịm, ọ bụ onye ọka iwu ya ka ọ ga-edegara ya.
N’akwụkwọ ozi a anyị na-egosi na ị chọrọ ịgba alụkwaghịm di gị ma ọ bụ nwunye ya ndụmọdụ ka ọ nweta ọka iwu, ma ọ bụrụ na ịmebeghị ya. Ọ bụrụ na onye ọlụlụ gị enweela onye ọka iwu ma anyị degara onye ọka iwu ya akwụkwọ ozi ahụ, anyị ga-eziga akwụkwọ ozi na-ekwupụta ihe ị chọrọ gbasara, dịka ọmụmaatụ, ụmụaka, ụlọ, ọdịnaya, wdg.
Onye ọka iwu onye gị na ya bi nwere ike ịzaghachi leta a ma kwupụta uche onye gị na ya bi. N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-ahazi nzukọ ụzọ anọ, anyị na-anwa ịgbakọ ọnụ ọnụ.
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume gị na onye òtù ọlụlụ gị inwe nkwekọrịta, anyị nwekwara ike itinye akwụkwọ ịgba alụkwaghịm ozugbo na ụlọ ikpe. N'ụzọ dị otú a, a na-amalite usoro ahụ.
Kedu ihe m kwesịrị ịkpọrọ onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm?
Iji malite usoro ịgba alụkwaghịm ozugbo enwere ike mgbe nzukọ mmeghe gasịrị, achọrọ ọtụtụ akwụkwọ. Ndepụta dị n'okpuru na-egosi akara nke akwụkwọ ndị achọrọ. Ọ bụghị akwụkwọ niile dị mkpa maka ịgba alụkwaghịm niile. Onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm ga-egosi, n'okwu ikpe gị kpọmkwem, akwụkwọ ndị achọrọ iji dozie ịgba alụkwaghịm gị. Na ụkpụrụ, achọrọ akwụkwọ ndị a:
• Akwụkwọ alụmdi na nwunye ma ọ bụ nkwekọrịta ibikọ ọnụ.
• Akwụkwọ nwere nkwekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụ nkwekọrịta mmekọrịta. Nke a anaghị emetụta ma ọ bụrụ na ị lụrụ di na nwunye n'obodo.
• Akwụkwọ nnyefe na akwụkwọ ozi metụtara ya ma ọ bụ nkwekọrịta mgbazinye nke ụlọ.
• Nchịkọta akụkọ banyere ụlọ akụ, ego ndekọ ego, akaụntụ itinye ego.
• Nkwupụta kwa afọ, akwụkwọ ịkwụ ụgwọ na nkwupụta uru.
• Akpata ego ụtụ isi atọ ikpeazụ.
• Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ọrụ, nke ikpeazụ atọ kwa afọ akaụntụ.
• Iwu mkpuchi ahụike.
• Nchịkọta nke insurances: na aha nke aha insurances?
• Ozi gbasara ụgwọ ezumike nka ejiri. Ebee ka akwụ ụgwọ ezumike nka n'oge alụmdi na nwunye ahụ? Ole ndị bụ ndị ahịa ahụ?
• Ọ bụrụ na enwere ụgwọ: nakọta akwụkwọ ndị na-akwado ya yana ọnụọgụ na oge nke ụgwọ ahụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ịgba alụkwaghịm malite ngwa ngwa, ọ bụ ihe amamihe ịnakọta akwụkwọ ndị a tupu oge eruo. Onye ọka iwu gị nwere ike rụọ ọrụ na ikpe gị ozugbo nzukọ mmeghe ahụ gasịrị!
Mgbe ụmụaka metụtara, ọ dị mkpa ka a na-elebara mkpa ha anya. Anyị na-ahụ na a tụlere mkpa ndị a dị ka o kwere mee. Ndị ọkàiwu ịgba alụkwaghịm anyị nwere ike ịmepụta gị usoro nne na nna nke nkewa nke nlekọta nke ụmụ gị mgbe ịgba alụkwaghịm malitere. Anyị nwekwara ike gbakọọ maka ego ole nkwado ụmụaka ga-akwụ ma ọ bụ nata.
Gbara alụkwaghịm ma ị nwere esemokwu banyere, dịka ọmụmaatụ, irube isi ma ọ bụ nkwado nwa? Ka ì nwere ihe mere ị ga-eji kwere na onye ị lụburu di ugbu a nwere ego ọ ga-eji na-elekọta onwe ya? Ọzọkwa n'okwu ndị a, ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm nwere ike inye gị nkwado iwu.
Ajụjụ ndị a na-ajụkarị maka ịgba alụkwaghịm
Kedu ihe ọ na-ewe ịkpọ onye ọka iwu?
Law & More na-arụ ọrụ dabere na ọnụego awa. Oge awa awa anyị bụ € 195, ewepu 21% VAT. Oge izizi ọkara ọkara enweghị ụgwọ. Law & More anaghị arụ ọrụ na ndabere nke enyemaka gọọmentị kwadoro.
Kedu usoro ọrụ nke Law & More?
Ndị ọkàiwu na Law & More so na nsogbu gị. Anyị lere ọnọdụ gị anya ma mụọ ọnọdụ iwu gị. Mụ na gị, anyị na-achọ azịza ga-eweta esemokwu ma ọ bụ nsogbu gị.
Ogologo oge ole ka ịgba alụkwaghịm na-ewe?
Ọ bụrụ n’ikwere, ịnwere ike ịgbazite onye ọka iwu na-ejikọ ọnụ. N’ọnọdụ dị otú a, ụlọ ikpe ahụ nwere ike ikwu na ịgba alụkwaghịm site n’inye iwu n’ime izu ole na ole. O buru na ikwenyeghi, onye o bula n’ime gi ga-enweta onye oka iwu nke ya. N’ọnọdụ dị otú ahụ, ịgba alụkwaghịm nwere ike iwe ọtụtụ ọnwa.
Iwu ụlọ ikpe dị mkpa maka ịgba alụkwaghịm?
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịgba alụkwaghịm, ọ dịghị mkpa ka ikpe ụlọ ikpe. A na-eleba alụkwaghịm a na-agba alụkwaghịm anya n’ụlọikpe.
Gini bu nmeghari anya?
N’usoro nke mkpezi, ị gbalịrị iso onye nke ọzọ dozie nsogbu gị n’okpuru nlekọta nke onye ogbugbo. Ọ bụrụhaala na e nwere nkwado dị n'akụkụ abụọ ahụ iji chọọ ihe ngwọta, ogbugbo nwere ohere nke ịga nke ọma.
Kedu otu usoro mgbasa ozi si arụ ọrụ?
Usoro nke ikpezi esemokwu metụtara: ịjụ ajụjụ ọnụ na ọtụtụ nnọkọ iji nweta nkwekọrịta. Ọ bụrụ na e nwee nkwekọrịta, edere nkwekọrịta ndị ahụ edetu na ederede.
Kedu mgbe m gbara alụkwaghịm?
Are gbara alụkwaghịm site na ụbọchị nke iwu edepụtara ịgba alụkwaghịm banyere n'akwụkwọ ndekọ obodo nke obodo ebe ị lụrụ.
Mụ na onye òtù ọlụlụ m enweghị ike ikwenye na nkewa nke obodo alụmdi na nwunye, gịnị ka anyị kwesịrị ime ugbu a?
Inwere ike ịrịọ ụlọ ikpe ka ha chọpụta (ụzọ) esi kee nke obodo alụmdi na nwunye ihe onwunwe dị n’etiti gị na onye ọlụlụ ibe gị.
Kedu ihe anyị kwesịrị iji ihe onwunwe nkịtị mee?
Ọ bụrụ na ị lụrụ di na nwunye na mpaghara nke ihe onwunwe, ị nwere ike kewaa ihe ndị a na ọkara ma ọ bụ were ha n'aka onye ọzọ maka ịtụle uru ha bara.
Achọrọ m ịga n'ihu biri n'ụlọ anyị jikọtara ọnụ, ọ ga-ekwe omume?
Ebe mbido bụ na ị nwere ike biri n ’ụlọ a na-ejikọ aka, ma ọ bụrụhaala na i nwere ike ịkwụ ọkara nke ihe ọ bụla bara uru nye onye gị na ya lụrụ ma hapụ onye ọlụlụ ibe gị site na nkwonkwo yana ọtụtụ ụgwọ maka mgbazinye ego mgbazinye ego.
Nchupu nke ebe aluru di na nwunye, olee otu osi aru oru?
Inwere ike ịhazi nhazi mmezi ego nke mmekọrịta na mpụga ụlọ ikpe. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụ ejiri ike gị rụọ ọrụ, iwu ji gị ịhazi atụmatụ nne na nna gị.
Kedu ihe ịgba alụkwaghịm na-efu?
Ego nke onye ọka iwu na-adabere na oge ejiri nọrọ n'okwu gị. Ọnụ ụlọ ikpe ahụ bụ € 309 (ụgwọ ụlọ ikpe). The kotima si ụgwọ maka ijere alụkwaghịm aririọ ruru odika € 100.
Kedu ihe na-eme ezumike nka ewuru ewu mgbe ịgba alụkwaghịm gasịrị?
Iwu nke iwu (ịkwụ ụgwọ ezumike nka) pụtara na inwere ikike ịkwụ ụgwọ pacenti 50 nke afọ ezumike nka ochie nke onye ọlụlụ mbụ wulitere n'oge alụmdi na nwunye ahụ. Ọ bụrụ na ndị mmekọ abụọ ahụ kwenyere, ịnwere ike ịgbanwe ikike gị na ego ezumike nka ochie na ego ezumike nka onye gị na gị nwere ikike kwụụrụ onwe gị maka ịka nka ezumike nka ma ọ bụ họrọ maka nkewa dị iche
Gịnị bụ nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm?
Nkwekorita ịgba alụkwaghịm bụ nkwekọrịta dị n’etiti ndị bụbu di na nwunye nke ị nwere ike itinye nkwekọrịta mgbe ịgba alụkwaghịm. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịme ndokwa gbasara ego, nhazi maka ụmụaka na alimony. Ọ bụrụ na nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm bụ akụkụ nke usoro ụlọ ikpe, a na-akwado ya n'ụzọ iwu.
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na di m ma ọ bụ nwunye m anaghị erube isi na iwu ịgba alụkwaghịm?
Ọ bụrụ na nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm bụ akụkụ nke usoro ikpe ụlọ ikpe, nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm na-enye aha nwere ike ịmanye ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka akwadoro.
Gịnị bụ ihe na gịnị na-esoghị na mmetụta ezinụlọ?
Ihe niile dị n’ụlọ, ọba, ogige na ebe a na-adọba ụgbọala dị n’ime ya. Nke a metụtakwara ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ndị ọzọ. A na-akpọkarị ndị a iche iche n'ọgbụgba ndụ ahụ. Ihe na-abụghị nke ọdịnaya ahụ bụ ngwongwo jikọrọ ọnụ, ngwa ndị e wuru na kichin na, dịka ọmụmaatụ, tọgbọrọ ala.
Gịnị ga-eme ma m lụọ di na nwunye n’obodo?
Mgbe ị lụrụ di na nwunye na mpaghara nke ihe onwunwe, n'eziokwu, akụ na ụgwọ niile gị na onye gị na ya jikọtara. N'ihe banyere ịgba alụkwaghịm, akụ na ụgwọ niile na-ekekọrịta n'etiti gị. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike bụrụ na ewepụrụ ụfọdụ ihe, dị ka onyinye ma ọ bụ ihe nketa.
Mana kpachara anya: ebe ọ bụ na 2018, ụkpụrụ a bụ ịlụ di na nwunye na obere akụrụngwa. Nke a pụtara na akụnyeghi akụ na ụba tupu alụm di na nwunye ahụ esoghị na obodo. Naanị ihe ndị di na nwunye na-agbakọ mgbe ha lụrụ na-aghọ ihe onwunwe. Ihe niile mmadụ nwere na nzuzo tupu ya alụọ di ma ọ bụ nwunye anaghị ewepụ ya. Ihe obula nke biara na mgbe aluru di na nwunye site na ihe onwunwe na / ma obu ugwo, ghoro ihe ndi ozo. Na mgbakwunye, onyinye na ihe nketa na-anọgide bụrụ nke mmadụ, n'oge alụmdi na nwunye. Houselọ nwere ike bụrụ ihe ọzọ na nke a, ma ọ bụrụ na a zụtara ya tupu ya alụọ di na nwunye.
Kedu ihe ga-eme ma ọ bụrụ na m lụrụ di na nwunye tupu mụ alụọ di na nwunye?
Mgbe ị lụrụ di na nwunye ị họọrọ na-iche na akụ na ụgwọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgba alụkwaghịm, chee echiche banyere usoro mkpezi ma ọ bụ usoro ndị ọzọ e kwekọrịtara.
Gini bu nkebi iwu?
Ntọala ntinye bụ nkwekọrịta na nhazi ma ọ bụ nkesa ụfọdụ ego na ụkpụrụ. Enwere uzo abuo abuo: 1) Nkeji edemede nke oge: na njedebe nke afọ ọ bụla etinyere ego fọdụrụ na akaụntụ (s) na-ekewa n'ụzọ ziri ezi. A na-eme nhọrọ iji mee ka akụ ndị ọzọ dị iche. Mkpebi ahụ na-ewere ọnọdụ mgbe ewepụrụ ego akwụ ụgwọ ahụ site na isi obodo ewuru. 2) Ikpeazụ nkwekọrịta nke ikpeazụ: Ọ bụrụ na ịgba alụkwaghịm, ọ ga-ekwe omume iji nkebi ikpebi ikpeazụ. Gị na onye òtù ọlụlụ gị kewaa ihe njikọ ahụ n'otu ụzọ ahụ dị ka a ga - asị na ị lụrụ di na nwunye n'obodo. Nwere ike ịhọrọ akụ nke anaghị esonye na nkewa ahụ.
Kedu ihe metụtara akụ? Kedu ngwongwo ndị fọdụrụ na mpụga obodo nke ihe onwunwe?
Achọpụta ụfọdụ akụ na akpaghị aka dịka ihe jikọrọ gị na onye gị na ya. Ihe ndị a nwere ike ọ gaghị etinye n'oge ịgba alụkwaghịm. Ihe nketa ma ọ bụ onyinye na-adịkwa na mpụga obodo nke ihe onwunwe kemgbe 1 Jenụwarị 2018. Tupu 1 Jenụwarị 2018, a ga-etinye nkebi nke ikwekọ na onyinye nke onyinye ma ọ bụ uche.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ibikọ ọnụ ọnụ ụlọ ebe ibe ha bi?
Onye ọka ikpe na-ekpebi onye a ga-ahapụ ibi n'ụlọ ahụ mgbe ịgba alụkwaghịm gasịrị, ọ bụrụ na unu abụọ chọrọ ibi ebe ahụ. A ga-agbanwe nkwekọrịta ya na ụlọ obibi ma ọ bụ onye nwe ụlọ, ya na onye enyere ikike ibi ebe ahụ dịka naanị onye nwe ụlọ ahụ. Onye a ga-ahụ maka ịkwụ ụgwọ ụlọ na ụgwọ ndị ọzọ.
Ọtụtụ mgbe ẹbụp ajụjụ na alimoni
Kedu ka usoro nkwado ụmụaka si aga n'ihu?
Usoro alimoni na-amalite site na ịgba akwụkwọ. Lọ ikpe ahụ ga-enye onye nke ọzọ ohere ịnye mgbachitere ya. Ọ bụrụ na eme nke a, a ga-anụ usoro ahụ. Lọ ikpe a ga-ekpezi ikpe.
Enwere m ikike ịkwado di na nwunye?
Inwere ike ịkwado di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụrụ na ị lụọla di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ banye na mmekọrịta edenyere na enweghị ike ịkwado onwe gị.
Onye ọlụlụ m anaghị akwụ ụgwọ mmezi ahụ, gịnị ka m ga-eme?
Nwere ike ịnye onye ọlụlụ gị mara ọkwa nke ndabara ma setịpụ oge a ga-akwụ ụgwọ alimoni ahụ. Ọ bụrụ na onye ọlụlụ mbụ gị anaghị akwụ ụgwọ alimoni ahụ n'ime oge a kara aka, mgbe ahụ ọ bụ nke ndabara. Ọ bụrụ na nkwekọrịta na mmezi gụnyere na usoro, ị nwere ikike ị ga-enwerịrị. Nwere ike mgbe ahụ naghachi alimoni n'aka onye bụbu onye gị na mpụga nke ụlọ ikpe. Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, ịnwere ike ịrịọ nnabata na ụlọ ikpe.
Kedu nsogbu ụtụ isi nke ịkwụ ụgwọ alimoni?
Mmekọrịta alimoni bụ tax deductible maka payer na-ahụta taxable ego maka nnata. Immụrụ nwatakịrị anaghị atụ ụtụ ma ọ bụ ụtụ isi.
Ọtụtụ mgbe ẹbụp ajụjụ banyere ụmụaka ịgba alụkwaghịm
Achoghi m ka umu m na onye m luru biri, m nwere ike hazie ihe a?
Nwere ike ịrịọ ụlọ ikpe ka gị na gị biri. Courtlọ ikpe a ga-eme mkpebi dị otu a na-eche na ọ bụ maka ọdịmma ụmụ gị, na-eburu n'uche ọnọdụ niile nke ikpe ahụ.
Kedu mgbe ị ga - eme atụmatụ nne na nna yana gịnị dị na ya?
Y’oburu na inwere umu aka iri na abuo ndi gi na ha jikotara aka na nkpo, ha kwesiri idozi usoro nne na nna ha. Ekwesiri ime nkwekorita banyere isi ulo nke umuaka, nkewa nke nlebara anya, uzo esi eme mkpebi banyere umuaka, otu esi agbanwe ozi banyere umuaka na nkewa nke ego nke umuaka (nkwado umuaka).
Gịnị banyere ikike ndị mụrụ ụmụ nwere mgbe alụkwaghịm di na nwunye gasịrị?
Mgbe ịgba alụkwaghịm ma ndị nne na nna jigidere ikike nke nne na nna, belụsọ na ụlọ ikpe kpebiri na ikike ikike nke nne na nna kwesịrị ịkwụsị.
Kedu mgbe m nwere ikike ịkwado nwa?
Inwere ike ịkwado nwa ma ọ bụrụ na gị onwe gị enweghị ego zuru ezu iji kwụọ ụgwọ maka ụmụ gị.
Kedụ ka esi ekpebi ego nwa / ibe ya ga-akwado?
Inwere ike ikwenye na ego ole nwa na enyere gi. Nwere ike idekọ nkwekọrịta ndị a na nkwekọrịta. Ọ bụrụ na ụlọ ikpe edekọ nkwekọrịta ndị a na akwụkwọ ịgba alụkwaghịm, a ga-enwerịrị ndị iwu kwadoro. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iru nkwekọrịta, ịnwere ike ịrịọ ụlọ ikpe ka ekpebie ego alimoni. N'ime nke a, onye ọka ikpe ga-eburu n'uche ihe dị iche iche, dị ka ego ha ga enweta, ikike ego, mmefu ego ụmụaka na nhazi nleta ahụ.
Gịnị na-eme ngwongwo ụmụaka ahụ?
Ihe ndị a bụ nke ụmụaka n'onwe ha. Ha nwere ike ikpebiri onwe ha ihe na-eme ha na ndị nne na nna ha ga-eso. Ọ bụrụ na ụmụaka etorubeghị ime mkpebi a, gị na onye òtù ọlụlụ gị kwesịrị ịhazi oge.
Ọ bụrụ na ịchọtaghị azịza nye ajụjụ gị na ndepụta anyị nke ajụjụ a na-ajụkarị, biko kpọtụrụ onye ọka iwu anyị nwere ahụmahụ ozugbo. Ha nwere ike ịza ajụjụ gị ma nwee obi ụtọ iso gị chee echiche!